Vizio Remote Kudzora Muchinjiko Kutaura - MediaLight Bias Mwenje
Vizio Remote Kudzora Muchinjikwa Kutaura
Iwe wawana peji rino nekuti Vizio TV yako kana bharuti rine zvimisoro zvekutaura pamwe nemamwe maremote control, kusanganisira mutungamiriri weMediaLight bias magetsi system.
Kunyanya, vhoriyamu pasi uye iyo 20% bhatani reMediaLight inogona kupindira. Kudzikisa vhoriyamu kunogona kudzima mwenje yako, kana kudzikisira mwenje wako kunogona kugadzirisa vhoriyamu yako. Mwenje inogona zvakare kudzima pane dzimwe nguva.
Izvi hazvina kumbounza matambudziko kune vatengi vazhinji nekuti, kusiyana nemazhinji maTV, Vizio ine sarudzo pasi pemashandisirwo emushandisi inonzi "Bvisa USB neTV."
Kana iwe ukasarudza iyi modhi, mwenje inovhura uye kudzima neVizio TV pasina kuda kushandisa remote control yemarambi.
Mune ino kesi tinokurudzira imwe yesarudzo mbiri:
1) Isa iyo MediaLight inogamuchira kuseri kweTV saka Iri kunze kwetambo yekuona yeVizio kure. Unogona kushandisa MediaLight kure kutenga uchifamba padyo kana kuseri kweTV neiri kure, zvisinei kana iyo MediaLight yaiswa kusvika gumi muzana yekupenya kwakanyanya kwechiratidziro, haufanire kunge wakambofanira kumisazve.
2) Vhara iyo inogamuchira nealuminium pepi kana iwe uchinge waisa kupenya mwero. Simba kubva kuTV uye yako Vizio kure haizokonzere mwenje.
Kana dambudziko rako rakakonzerwa neVizio sound bar uye kwete Vizio TV (kana kana iwe uchida kushandisa iri kure nekuda kwezvikonzero zvisina kutaurwa pamusoro), isu tinopa dimmer rakasiyana raunogona kushandisa neMediaLight. Yakakura kupfuura iyo kure kure kure.
MuUSA, iwe unogona kuwana yemahara imwe nzira iri kure uye yakasviba neako MediaLight odha. Ingokumbira imwe chete kuburikidza nefomu pazasi kana kuisa katsamba panguva yekutora. Kana iwe ukakumbira imwe mushure mekunge watogamuchira odha yako, ichiri yemahara asi iwe unobhadhara kutumira (ingangoita $ 3.50 yekutanga tsamba tsamba).
Kana izvi zviri zvekare, iwe fanira sanganisira inoshanda odhi ID muchikumbiro chako.
Kune avo vari kunze kweUSA, kune mari yekutumira ye $ 14 kana iwe uchingoraira yemahara kure. (Iyi ndeyedu mutengo yekutanga kirasi tsamba dzepasi rese. Zvisinei, Vizio haatengesi maTV akawanda kunze kweU.SA, saka isu hatizvione izvi kunze kweUSA kazhinji).